Funda ukuthi ungayilungisa kanjani i-router kusuka ngo-192.168.1.1 | Izindaba zamagajethi
U-Ignacio Sala | | Izifundiswa
Uyazi lungiselela i-router kusuka ku-192.168.1.1? Isikhathi esithile manje, ama-routers abe yithuluzi eliyisisekelo kuwo wonke amakhaya lapho sidinga ukukhulisa insimu yokuhlanganisa ukuxhumana kwethu kwe-Intanethi. Yize kuliqiniso ukuthi namuhla iningi lama-modem afakwe opharetha nawo asebenza njenge-router, ezimweni eziningi, uhla lwawo lwe-Wi-Fi lushiya okuningi ongakufisa., ngaphezu kokusinikeza izinketho ezimbalwa kakhulu zokumisa.
Kulezi zimo, siyaphoqeleka ukuthenga i-router, uma kungenzeka ukuthi ungumabili-band ukuze uzuze ezinzuzweni zejubane ezinikezwa yi-5 GHz band, ibhendi okuthi yize kuyiqiniso ukuthi ububanzi abubanzi njenge-2,4 GHz , ijubane elisinikeza lona liphakeme kakhulu. Kulesi sihloko sizokukhombisa ukuthi kanjani singafaka ukumiswa kwe-router.
Inkinga yokuqala esiyitholayo lapho sifinyelela kumzila wethu ngumkhiqizi. Umkhiqizi ngamunye ukhetha ukufaka ikheli le-IP elihlukile ukukwazi ukufaka ukumiswa kwe-router futhi sikwazi ukulungisa amapharamitha adingekayo ukuze ahambisane nezidingo zethu, kungaba ngokwenza kusebenze noma ukucisha amabhendi, ukushintsha igama le-SSID, ukunika amandla ukusetshenziswa kwe-IP emile, ukuvula amachweba ...
1 Yini i-router
2 Ungayithola kanjani i-router
3 Ungayilungisa kanjani i-router
3.1 Shintsha igama nenethiwekhi ye-SSID / Wi-Fi
3.2 Hlunga nge-MAC amadivayisi angaxhunywa
3.3 Ukulawulwa kwabazali
3.4 Shintsha ishaneli yesiginali yethu
3.5 Vula amachweba
3.6 Yenza kusebenze noma uvale amabhendi
3.7 Shintsha igama lomsebenzisi ne-password ye-router
3.8 Bheka ukusebenza kahle kwe-router
Kalula nje, i-router iyi- umzila, ukuthi uphethe ukuqondisa ithrafikhi yemodemu yethu, imodemu ene-IP, i-static noma enamandla, esikhonjwa ngayo kwi-Intanethi. Ngokuya ngenani lemisebenzi i-router esinikeza yona, izoba nenani eliphakeme, ngakho-ke lapho uthenga i-router kufanele ucabangele izinto ezahlukahlukene, njengejubane eliphezulu, amabhendi, izinketho zokumiswa kwezivakashi ...
Ungayithola kanjani i-router
Ezimweni eziningi, ukuze ukwazi ukufinyelela ku-router, i-IP ezosetshenziswa ingu-192.168.1.1, kepha abanye abakhiqizi bakhethe ukusebenzisa i-192.168.0.1, isizathu abasiqondayo kuphela. Kepha ngaphezu kwalokho kufanele futhi sazi ngaso sonke isikhathi ukuthi igama lomsebenzisi nephasiwedi efanayo, ngoba uma kungenjalo, noma ngabe silazi ikheli le-IP lomzila, ngeke sikwazi ukufaka ukucushwa futhi siguqule amapharamitha adingekayo. Lolu lwazi imvamisa itholakala ezansi kwedivayisi, ukuze ihlale iseduze.
Uma ingekho, kuzofanele siye kumhlahlandlela wokufaka wedivayisi. Uma siyilahlile, noma siyilahla ngoba sicabanga ukuthi ulwazi oluqukethwe kumhlahlandlela belungadingekile, singaya ku-Google bese sibheka iphasiwedi negama lomsebenzisi lomkhiqizo we-router esinalo. Lolo lwazi kuyafana kuwo wonke amadivayisi womkhiqizo futhi ayihlobene nganoma yisiphi isikhathi nokhiye we-WIFI esisebenzisayo.
Khumbula ukuthi uma umuntu efuna ukufinyelela kumzila wethu, kufanele uqale ufinyelele uxhumano lwethu lwe-inthanethi, inqubo enzima kakhulu uma singasebenzisi amaphasiwedi ajwayelekile wesitayela 123456789, iphasiwedi, iphasiwedi, qwertyui ... Uma ucabanga ngalolu lwazi, kusobala ukuthi imininingwane yokufinyelela ku-router, noma ngabe iluphi uhlobo lomkhiqizo, iyatholakala ku-Intanethi .
Ngokulandelayo ngikushiya uhlu olunamakheli e-IP ukuze ukwazi ukufinyelela kuma-routers wabakhiqizi abakhulu.
I-Linksys - http: // 192.168.1.1
IHuawei - http: // 192.168.1.1
I-TP-Xhumanisa: http: // 192.168.1.1
I-Asus: http: // 192.168.1.1
I-D-Link - http: // 192.168.0.1
Ezimweni eziningi Kokubili igama lomsebenzisi nephasiwedi ngu "admin", kepha kokunye, igama lomsebenzisi lithi "impande" futhi iphasiwedi ngu "admin" noma "1234" noma okuphambene nalokho. Uma kungezona zombili lezi, kuzofanele ubheke ezansi kwedivayisi, ibhukwana lokufaka noma uxhumane ne-Intanethi.
Ungayilungisa kanjani i-router
Shintsha igama nenethiwekhi ye-SSID / Wi-Fi
Opharetha bavame ukusebenzisa igama elijwayelekile lapho uqamba isignali ye-wifi yamadivayisi asifakayo, igama kwesinye isikhathi elifana kakhulu nalokho esingakuthola endaweni yakithi futhi ngokuvamile okunzima kakhulu ukukhumbula. Ngenxa yomzila, yize singakwazi futhi ukukwenza ngqo kusuka kwimodemu, singasebenzisa noma yiliphi elinye igama lenethiwekhi entsha ye-Wi-Fi esizoyakha ne-router. Ngaphezu kwalokho, kungakuhle ukuthi uyiguqule ukuze abangane babanye bangatholi ithuba lokusebenzisa izichazamazwi lapho bazi i-SSID yomzila opharetha asifakele wona.
Hlunga nge-MAC amadivayisi angaxhunywa
Ukuhlunga kwe-MAC kusetshenziswa kakhulu ezinkampanini, lapho kungaxhunyaniswa kuphela kunethiwekhi lapho kuvunyelwe kuphela amadivayisi, ngakho-ke akwanele ukwazi igama lenethiwekhi, umsebenzisi nephasiwedi. Ukuhlunga kwe-MAC kusivumela ukuthi sengeze ikheli le-MAC ledivayisi yethu ukuze i-router ivumele ukufinyelela kwayo. I-MAC yamadivayisi ifana nepuleti lelayisense elinayo yonke idivayisi. Le MAC ayiphindi futhi ihlukile kudivayisi ngayinye.
Ngenxa yalolu khetho, singakwazi ukuthola ukuthi izingane zethu zingaxhuma ku-inthanethi ngasiphi isikhathi kwizinto ezisetshenziswa kakhulu. Nathi singakwazi setha ukuthi imaphi amakhasi e-web ongavakashela kuwo ngaphandle kokuthi sibe ngaphansi kweso lethu ngaso sonke isikhathi.
Shintsha ishaneli yesiginali yethu
Ibhendi esetshenziswa ngama-routers ngumgwaqo owusebenzisayo ukuthumela isignali. Uma ibhendi iminyene kakhulu, ngoba iningi lamasignali e-Wi-Fi emvelweni yethu ayalisebenzisa, indlela eyodwa yokwenza ijubane ukuguqula ibhendi ibe ngeyomgwaqo omncane endaweni yethu. Enye yezicelo ezinhle kakhulu esivumela ukuthi sithole lolu lwazi I-InSSIDer Office ye-Windows, o I-Wifi Analyzer, itholakala mahhala ku-Windows Store. Singasebenzisa futhi izinhlelo ezikhona zamadivayisi eselula. njenge-Wifi Analyzer noma i-Network Analyzer.
Ezinye zezinhlelo zokusebenza esizifakile kukhompyutha yethu zisebenzisa amachweba avaliwe ngokuzenzakalela, ukugwema ukuhlaselwa abangane babanye abantu. Uma sifuna ukujabulela zonke izinketho ezinikezwa uhlelo lokusebenza, kufanele siye ku-router futhi vula amachweba asitshela wona, ukuze ngale ndlela zombili uhlelo lokusebenza likwazi ukufinyelela ngokugcwele kwi-Intanethi, ngoba uma kungenjalo ukusebenza ngeke kwanele noma ngokuqondile ngeke.
Kumachweba atholakalayo angama-65.535, 1 kuya ku-1023 amachweba aziwayo futhi asetshenziswa kakhulu uhlelo ukuxhumana nezinye izinhlelo zokusebenza noma ne-Intanethi. I-Port 1024 kuya ku-49.153 ibizwa ngamachweba abhaliswe ngomsebenzi othile. Kusuka ku-49.154 kuye ku-65.535 sikhuluma ngamachweba ashukumisayo okusetshenziswa ngasese, ngakho-ke abananhloso ebekiwe.
Yenza kusebenze noma uvale amabhendi
Njengoba ngishilo ngenhla, ama-routers, okungenani lawo aphezulu, isinikeza izinhlobo ezimbili zamabhendi: 2,4 GHz, itholakala kuwo wonke ama-routers asinikeza uhla olukhulu, ne-5 GHz band, ibhendi ebonakala ngokunikeza isivinini sokuxhuma siphakeme kakhulu kunaleso esitholakala kumabhendi e-2,4 GHz, kepha ububanzi bungaphansi. Kusukela ekucushweni kwe-router, singenza kusebenze futhi singasebenzi ukusetshenziswa esifuna ukukwenza kwamabhendi, futhi sisebenzise igama elehlukile ukuze sikwazi ukuwakhomba ngendlela elula.
Shintsha igama lomsebenzisi ne-password ye-router
Akukaze kucetyiswe ukushintsha lolu lwazi ngaphandle kokuthi sinesidingo sokufinyelela i-router cishe nsuku zonke, ngoba ngokuhamba kwesikhathi, kungenzeka kakhulu ukuthi sikhohlwe igama lomsebenzisi nephasiwedi uma singalibhalanga ngaphansi nje kocingo. Njengoba ngishilo ngenhla, ukuze othile akwazi ukufinyelela kumzila wethu, okokuqala kufanele ube nokufinyelela ekuxhumekeni kwethu kwe-inthanethi, okuthile okungenakwenzeka njengoba ngishilo esigabeni esedlule.
Bheka ukusebenza kahle kwe-router
Uma ukuxhumana kwethu kwe-inthanethi kungasebenzi ngendlela efanele, okokuqala kumele sihlole ukuthi ngabe ukuxhumana kwemodemu yethu nokwe-router yethu akulungile yini. Ukuze senze lokhu, kufanele siye kuthebhu yesimo, lapho izokhonjiswa khona esigabeni se-Log, uma i-router unenkinga ngokuxhumeka kwakho kwe-inthanethi ithunyelwe yimodemu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izifundiswa » Lungiselela irutha